I-Ultrasonic Nano-Encapsulation ye-Ivermectin - Hielscher Ultrasound Technology
Izidakamizwa ezinje nge-avermectin ne-ivermectin zivame ukufakwa kwi-nano-ehlelwe izidakamizwa zezithwali ukuze kuthuthukiswe izinga lokulimala kanye ne-bioavailability futhi kutholakale umphumela ‑ wokukhululwa. I-Ultrasonic nano-emulsation iyindlela ephumelelayo nethembekile yokufaka amakhompiyutha ezokwelapha asebenzisa ama-nanoparticles aqinile-lipid, ama-liposomes noma ama-cyclodextrin complexes.
U-Ivermectin, ilungu lesigaba sezidakamizwa i-avermectin, umuthi olwa namagciwane osetshenziswa kakhulu ukwelapha ukutheleleka kwe-roundworm. Isebenza ngokubopha futhi kusebenze ama-glutamate-gated chloride channel receptors (ama-GluClRs), ngaleyo ndlela ikhubaze futhi ibabulale. Ngesikhathi sokucwaninga kokuthola ikhambi ngokumelene ne-COVID-19, lesi sifo esidalwe yi-noveli coronavirus SARS-CoV-2, ivermectin sagxila ocwaningweni lwe-pharma njengoba sabulala ama-SARS-CoV-2 coronavirus phakathi kokuhlolwa okungu-40 in "in vitro" . I-Aa isidakamizwa esivele savunyelwe i-FDA, isokhemisi le-ivermectin laziwa kahle futhi umuthi uzotholakala kalula ukuze usebenze ngokushesha nge-COVID-19. (isimo Aprili, 12, 2020).
Ukuqalwa kwe-Ultrasonic kwe-Ivermectin
Izithwali zezidakamizwa ezibizwa ngamaNano ezifana ne-solid-lipid nanoparticles (SLNs), ama-liposomes kanye ne-cyclodextrin complex ziyaziwa ukuthi zithuthukisa ukulethwa kwezidakamizwa kanye ne-bioavailability, ukuhlinzeka ukukhishwa kwezidakamizwa okuhamba kancane / okuqhubekayo, kanye nokuvikela i-molecule ye-bioactive ekulimaleni. Njengoba ivermectin ingahambisani neyodwa eyejwayelekile, edinga enye indlela. Ngaphezu kwalokho, ivermectin ithambekele kungcoliswa ukukhanya, i-oksijini kanye ne-hydrolysis, ukuze ukuguquguquka kusize ukuvikela futhi kuzinzise insimbi yezidakamizwa. Ama-nanoparticles a-Solid-lipid nanoparticles, ama-liposomes noma ama-icymectin enzelwa i-cyclodextrin akhombisa imiphumela emihle enikeza ukuvikelwa ekuwohlokeni nasekuphuculeni i-solubility nokuqina.
Ama-ivermectin-SLNs alungiselelwe nge-ultrasonic akhombise ukusebenza kahle kwesibalo (i-EE) ngobukhulu obuncane bokusabalalisa. Ucwaningo lokukhishwa lukhombisa amaphethini wokukhishwa ahamba kancane futhi aqhubekayo we-ivermectin-SLNs.
I-Ultrasonic Encapsulation ye-Ivermectin ku-Solid-Lipid Nanoparticles
I-Ultrasonically ekhuthaza ukwakheka kwe-nanoparticles eqinile ye-ultrason kuyindlela eyaziwayo esetshenziselwa ukwakheka kwezixakaxaka zezemithi ngesilinganiso esiphakeme sokufaka kanye ne-bioaccessability, cytotoxicity ephansi, kanye nokukhishwa kwezidakamizwa okuqhubekayo.
UGuo nozakwabo abasebenza nabo (Guo et al. 2017) bakhombise ocwaningweni lwabo ukuthi ukufakwa kwe-ivermectin kwe-ivermectin kuzinhlobo eziqinile ze-lipid nanoparticles (SLNs) kuholele ekutheni izinhlayiyana ze-ivermectin eziphakathi kwama-SLN zikhombise ukukhishwa isikhathi eside kwama-molecule wezidakamizwa kuma-SLNs ngaphandle kokukhishwa okufanelekile ekusebenzeni kahle kokuguquguquka (EE).
Ukulungiswa kwe-ivermectin SLNs kwenziwa ukuze kusebenze protocol elandelayo:
Ama-SLN alungiswa yi-homogenisation eshisayo, elandelwa yi-ultrasonication. Kafushane nje, i-Palmitic acid (0.5 g) yancibilika engxenyeni engilazi engu-30-ml yigraphothi eyi-75ºC. I-ivermectin (0.09 g) yabe isincibilika ku-lipid encibilikisiwe. Isigaba se-lipid ngemuva kwalokho sathululelwa ku-15mL yesisombululo samanzi esibilayo nge-1% PVA (w / v) ngaphansi kovuselelo olunamandla ngo-300rpm ngemizuzu eyi-10 ukwakha i-emulsion eyi-co -se-water coarse. Ngemuva kwalokho, i-emulsion yenziwa indodana imizuzu emi-5, kwathi-ke imitha eli-15 yamanzi abandayo (4ºC) yathululelwa ngokushesha ukuthola ama-ivermectin-SLNs. Abalawuli be-SLN balungiswa ngokulandela inqubo efanayo ngaphandle kokufakwa kwe-ivermectin.
I-Liposomal Avermectin Ukwakhiwa
AmaLiposomes akhiwa kusuka kuma-bilayers we-phospholipid owodwa noma amaningi. Ukuhlanganisa amakhemikhali okwenziwa ngamakhemikhali nokwenziwa kwezinto eziphilayo ukuze akhiqize ama-liposomes ajikelezayo ahlala isikhathi eside kuvumela ukulungiswa kwama-liposomes nesikhathi sokujikeleza kwezidakamizwa esikhathi eside ku-vivo, ngaleyo ndlela kuthuthukisa ukusebenza. Isibonelo, isikhathi sokusebenza kwe-liposomal avermectin sanyuswa kusuka ezinsukwini ezingama-21 kuye kwezingama-30 ezimbuzini (iSund et al., 2014).
Ngaphandle kokwakheka kuma-nanoparticles aqinile-i-lipid, i-ivermectin ifakwe ngempumelelo kwi-liposomes nasezakhiweni ze-cyclodextrin.
Funda kabanzi mayelana nokwenziwa kwe-ultrasonic kwe Liposomes futhi cyclodextrin complexes!
Inzuzo ye-Ultrasonic Lipid Nanoparticle Ukulungiselela
Ukulawulwa okuqondile kwesayizi yezinhlayiyana ze-lipid nomthwalo
Umthwalo ophezulu wezinto ezisebenzayo
Ukulungiswa kwama-liposomes asezingeni eliphakeme, i-lipop nanoparticles eqinile, i-polymeric nanoparticles kanye ne-cyclodextrin complexes izinqubo, okuyizinhlelo ze-Hielscher ultrasonic ezisetshenziselwa ukuthembeka okuphezulu nokuphakeme kwekhwalithi ephezulu. Ama-ultrasonicators we-Hielscher avumela ukulawula okuqondile kuwo wonke amapharamitha wenqubo, njenge-amplitude, izinga lokushisa, ingcindezi namandla we-sonication. Isoftware ehlakaniphile ithela ngokuzenzakalelayo yonke imingcele ye-sonication (isikhathi, usuku, amplitude, amandla net, amandla aphelele, izinga lokushisa, ingcindezi) ekhadini le-SD-khadi elakhelwe ngaphakathi.
Ivermectin ingxube equkethe okungenani i-90% 5-O-demethyl-22,23-dihydroavermectin futhi engaphansi kwe-10% 5-O-demethyl-25-de (1-methylpropyl) -22,23-dihydro-25- (1 -
methylethyl) avermectin, ngokuvamile ebizwa ngokuthi yi-22,23-dihydroavermectin.
I-Ivermectin iyatholakala njengesidakamizwa esivamile ekwakhiweni kwethebhulethi eyi-3mg. Amagama ohlobo lomkhiqizo ojwayelekile we-ivermectin yiDriponin neScrabioral eJalimane, i-Heartgard, Sklice neStromectol e-United States, naseMectizan eCanada ukusho nje abambalwa.
Ama-Avermectin ama-disaccharides (ivermectin, doramectin) noma ama-monosaccharides (selamectin). Ama-Avermectins awuchungechunge wokutholakala kwe-macrocyclic lactone nemiphumela ye-antiparasite, ikakhulukazi esetshenziselwa ukwelapha izifo ze-nematode. Ayingangeni emanzini, i-avermectin inganyibilika nge-methanol ne-95% ethanol.